KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Qarax kale oo ka dhacay Xaafada Islii
Friday 7 December 2012 21:34
Qarax kale oo ka dhacay Xaafada Islii
Nairobi (KON) - Waxaa goor dhaw ka dhacay Xaafada Soomaalida dagta ee Islii ee Magaalada Nairobi Qarax xooggan, waxaana Qaraxaan uu ka dhacay Albaabka Masjidka Alhidaaya ee waddada Jaam Street.
Qaraxaan oo dhacay Daqiiqado kahor ayaa wali cadeyn Khasaaraha ka dhashay, laakiin Warar madax banaan ayaa sheegaya in Dad badan ey ku dhaawacmeen Qaraxaan.
Qaraxa ayaa ka dhacay Albaabka Masjidka Al Hidaaya, markii Salaada Cishaha laha soo baxay.
Ciidamda Booliska ayaa lagu soo daadiyay Magaalada, waxaana Xaafada Islii ka socda Howlgalo ey wadaan Booliska Kenya.
Sida Warbaahinta loo sheegay Qaraxa waxaa ku dhinteen 2 Ruux meshee 10 kale ey ku dhaawacmeen.
Dadkii ku dhaawacmeen Qaraxa waxaa ku jiray Xildhibaanka lagasoo doorto Xaafadda Kamakuunji ama Islii Yuusuf Xasan.